> Resource > iPhone > Sida loo Delete Xiriirada ka iPhone
Sidaas iPhone, barakayn ay wadnaha, helay overzealous oo lagala soo bixi 600 xiriirada ka Book Address, mid ka mid ahaa oo aan doonayo in. Waa maxay sida ugu dhaqsiyaha badnaa in ay tirtirto walax this? Fikrado kasta? Waxaan run ahaantii aanad doonayn in ay dhex maraan kun oo qasabno kaliya in ay nadiifiso ah xiriirada liiska goddamn.
Haddii aad ugu baahan isku dayayaan in ay ku ogaado sida ay u tirtirto dhammaan xiriirada on iPhone, aad tahay meel sax ah. Dhab ahaantii, ay ka saareen xiriirada iPhone noqon karaan kuwo fudud oo degdeg ah inta aad leedahay qalab ah oo khibrad leh. Haddii aanad haysan mid ka mid ah iyo sidoo kale doonayaan in ay tirtirto xiriirada ka kaaftoomi iPhone si xor ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo Retro . Sidaa daraadeed, idin ​​tagsiin karo xiriirada kala duwan ka iPhone ee xasuusta, Exchange, iCloud, Yahoo !, iwm mar. Ka hor inta xiriirada ka saareen, waxaad kaloo sameyn kartaa gurmad oo dhan xiriirada si aad u computer ah . Haatan waxaan diirada ku sheegaya sida loo tirtiri xiriirada ka iPhone aad. Akhri si aad u baratid wax dheeraad ah.
Delete xiriirada on iPhone 4 deg deg ah
Qaybta soo socda uu sharaxayaa sida in ay tirtirto xiriirada ka iPhone 4, iPhone 5, iPhone 4s, iyo iPhone 3GS. Ka hor inta la tirtiro xiriirada iPhone, waa in aad la soo baxdo iyo rakibi TunesGo Retro aad kombuutarka.
Tallaabada 1. Run qalab iyo xiriiriyaan iPhone la PC
Marka hore, ordo qalab this on your PC ka dib markii ay ku rakibidda. Isticmaal cable USB in kulan iPhone in ay ku xidhmaan iPhone aad kombuutarka. Marka ay ku xiran tahay, tababaraha iPhone taas ogaan doonaa iPhone, ka dibna waxa ay u muujiyaan in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Fadlan iska hubi in aad ku rakiban Lugood on your computer ka hor soo reynaya sidii xiriirada iPhone la TunesGo Retro. Kaliya la Lugood lagu rakibay, TunesGo Retro shaqeyn doonaa si sax ah.
Tallaabada 2. xiriirada Delete ka iPhone 4
Marka labaad, geedka saarnaa buugga bidix, waxaad ka arki kartaa oo dhan ku jira oo ku saabsan iPhone, oo ay ku jiraan Media, playlists, sawiro, xiriirada iyo SMS. Si aad u masixi xiriirada, waa in aad ku dhufo "Xiriirada". In "contacts", waxaad arki in xiriirada ku muujisan yihiin "On My iDevices", "Exchange", "Yahoo!", "iCloud" iyo xisaab kale. selct mid ka mid ah kuwa. Markaas, suuqa kala xiriir maamulka baahisey u muuqataa on xaq.
Hadda, doortaan xiriirada in aadan rabin in aad wax badan wax sii. Markaas riix "Delete". Inta lagu guda jiro u qaadidda xiriirrada, waxaa idinku waajib ah in aad iPhone ku xiran waqtiga oo dhan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad tirtirto conatcts ka xisaab, sida iCloud, Exchange iyo ahoo !, waa in aad soo gasho, kuwaas oo xisaab aad iPhone hore.
Bal eeg, siday u fududahay in ay tirtirto xiriirada ka iPhone in Dufcaddii. TunesGo Retro si buuxda u taageersan 5c iPhone iyo iPhone 5s brand-cusub.
Isku day TunesGo Retro in ay tirtirto xiriirada iPhone!